Ungayisebenzisa kanjani ikhibhodi yokuFinyelela ku-MacOS | Ngivela kwa-mac
Ungayinika kanjani amandla ikhibhodi yokufinyeleleka ku-macOS
Enye yezinto ezithuthukisiwe ezisetshenzisiwe ohlelweni lokusebenza lwe-Apple olusha luhlobene nokuFinyeleleka. Ngalesi sikhathi sizobona ukuthi kungaba lula kangakanani ukwenza kusebenze ikhibhodi esesikrinini kanye nentuthuko abayingezayo ngokuya ngokwezifiso ngumsebenzisi. Khumbula ukuthi ngalekhibhodi enikwe amandla ungazulazula kwi-MacOS ngaphandle kokusebenzisa ikhibhodi ebonakalayo, isekela amabha wamathuluzi nezithuthukisi zokuthayipha, njenge-auto-capitalization neziphakamiso.
Ungayisebenzisa kanjani ikhibhodi yokuFinyeleleka
Ukuphela kokufanele sikwenze ukusebenzisa le khibhodi ekusikrini ukuya ngqo kufayela le- Okuncamelayo kwesistimu bese uchofoza ku-Ukufinyeleleka. Ngalesi sikhathi kufanele wehle kuphela phakathi kwezinketho esizithola kukholamu yesokudla bese ucindezela ikhibhodi. Uma usunayo, kulula njengokufinyelela kuthebhu phezulu ethi "Ikhibhodi Yokufinyeleleka".
Simaka inketho futhi ikhibhodi ekusikrini ivela ngokuzenzakalela. Manje sesingakwazi ukwenza lekhibhodi ngendlela oyithandayo bese siyilungisa ukuze siyisebenzise. Lapho sifuna ukuthi lokhu kunyamalale esikrinini, simane nje simake ukumaka kukho Okuncamelayo Kokusebenza bese kuphelela lapho. Lekhibhodi entsha ingeza inketho yokwenza imali ngokuzenzekelayo kanye nezinye iziphakamiso ezenza ukuthi ukusetshenziswa kwayo kube lula kakhulu kumuntu ophambi kweMac, ngakho-ke unganqikazi sisebenzise lokhu nezinye izinketho enikezwe yi-Apple ngokuya ngokufinyeleleka kumakhompyutha abo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayinika kanjani amandla ikhibhodi yokufinyeleleka ku-macOS
Ngale ntengo i-AirPods Pro ayinakuphikiswa
I-trailer esemthethweni yochungechunge oluyidokhumentari lwe-Apple TV + "Sawubona ..."